Kedu otu esi arụ ọrụ nhicha na ndozi nke PVC egwuregwu egwuregwu? -News-Topflor China limited
Echiche:34 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-03-11 Mmalite: Saịtị
Dị ọcha dị ka ala ọhụrụ nwere ike ịsị na ọ ga-emecha njedebe maka ebe egwuregwu. Ọ bụrụ na ala ebe egwuregwu na-eme mkpọtụ, ọ gaghị emetụta ọnọdụ egwuregwu ndị mmadụ, kamakwa ọ ga-emetụta mmetụta egwuregwu ma belata ndụ ọrụ nke ala egwuregwu. , Ọ bụghị kwesịrị uru. Karịsịa ugbu a na ọrịa ahụ nwere ọgụ dị egwu, mkpocha na ịdị ọcha nke ebe egwuregwu agaghị adị jụụ. Egwuregwu egwuregwu a na-ejikarị amata bụ ebe a na-agbachi agbakọ, na-eme egwuregwu ime ụlọ na ụlọ egwuregwu PVC. Taa, m ga-eso gị kọwaa gị usoro nhicha na mmezi nke ụlọ egwuregwu PVC.
Fọdụ ndị mmadụ na-eche na mmezi nke ala egwuregwu PVC dị mfe. Ọ bụrụ na ala ruru unyi, hichaa ya na mop. Dị ka onye ọ bụla maara, mgbe eji ogologo oge na nhicha nke ala egwuregwu PVC, ntụpọ isi ike na ihe ndị fọdụrụ ga-agbakọta, na-eme ka ala dị jụụ ma daa. Ihe anyị kwesịrị ịma bụ na na nhicha kwa ụbọchị nke ala egwuregwu PVC, enweghị ike iji ihe siri ike acid ma ọ bụ alkali dị ọcha mee ka ala dị ọcha. Ejikọtara ya na Bona Clean R60 Cleaner floor, ọ nwere ike ịnye ala plastik ka mma mgbe ị na-ehicha ma na-edozi ya. Nchedo na-eme ka ala na-egbuke egbuke.
Na mgbakwunye na nhicha kwa ụbọchị, mmezi kwa ụbọchị nke ala egwuregwu PVC dịkwa ezigbo mkpa. Iji zere ibubata ájá n'elu akpụkpọ ụkwụ n'ime ebe ahụ ma mee ka ala PVC na-eyi na ọkọ, ị nwere ike ịtụle ịtọba ihe nchebe sandstone n'ọnụ ụzọ nke ebe egwuregwu ahụ; anaghi anabata ntu n’ulo egwuregwu. Akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ dị elu, adọkpụghị n'ala mgbe ị na-ebu ihe, ọkachasị ihe dị nkọ dị na ala; etinyela ala plastik ahụ na mmiri ogologo oge, ma ghara iji nsị anwụrụ ọkụ, ihe anwụnta, ebubo ebubo, ọla igwe dị elu Tinye ihe ozugbo na ala iji zere imebi ala PVC.
Sportslọ egwuregwu PVC na-achọkwa nhicha na ịrụzi ọrụ mgbe niile. N'ozuzu, a na-atụ aro ka ị mee wax otu ugboro n'ọnwa, mezie nhicha miri otu ugboro n'otu ụzọ n'ụzọ anọ, ma mezie ụlọ egwuregwu PVC otu ugboro n'afọ. Mgbe ị na-ehicha ma na-echekwa ala egwuregwu PVC, ị ga-akpachara anya ka ị ghara iji bọlbụ na-ehicha ma ọ bụ jiri mma chọọ ya. Maka unyi nke enweghị ike ihicha site na usoro ndị eji eme ihe, jiri usoro nhicha ọkachamara. A machibidoro iwu iji acetone, toluene na ọgwụ ndị ọzọ iji kpochaa ala PVC.